Umbhali weWindows Live kuWordPress | Martech Zone
Umbhali weWindows Live kuWordPress
NgoLwesibili, ngoJulayi 26, i-2011 NgeSonto, uJanuwari 19, 2014 Douglas Karr
Abanye abantu abakwazi ukuma basebenzise amathuluzi wokuhlela asuselwa kuwebhu eza nezinhlelo zokusebenza ezifana ne-WordPress. Angibasoli… ngiyeke ukwenza i- ithuluzi lokuhlela elicebile eminyakeni edlule ngimane ngibhale i-HTML yami kokuthunyelwe yibhulogi yami. Kukhona enye indlela yabasebenzisi beMicrosoft Windows ebengikhombisa ikhasimende kulobubusuku, kepha… Umbhali weWindows Live.
Umbhali weWindows Live ubelokhu ekhona iminyaka embalwa manje kanti neWordPress yakhelwe ngaphakathi API ukuyenza ikwazi ukuxhumana. Ungalanda ngisho netimu yakho ku-Windows Live Writer ngakho-ke kubonakala sengathi ubhala ngqo ekubukekeni nasekuzizweni kwebhulogi yakho.
Isinyathelo sokuqala ukusetha ikhono lokushicilela okusalungiswa kwakho nokuthunyelwe nge-Intanethi. Lokhu kufezwa kuzilungiselelo> Ukubhala isigaba sokuphathwa kwe-WordPress:
Okulandelayo, uzofuna ukulanda I-Windows Live Essentials 2011. Kunezinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezizosethwa ukuthi zilayishwe ngokuzenzakalela nge-Live Essentials… Ngingahloli zonke izinhlelo zokuzikhethela ukuze umane ufake i-Live Writer:
Uma ifakiwe, vula Umlobi ophilayo bese ukhetha ipulatifomu yakho yokubhuloga - WordPress kulokhu:
Isinyathelo sokugcina ukuxhuma nebhulogi yakho. Kufanele uthayiphe ibhulogi yakho i-URl kuphela, igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi futhi kufanele ixhumeke kahle. Uma ubuzwa, ngincoma ukulanda isihloko sakho sebhulogi ukuze uthole ukubukeka kwangempela futhi uzizwe kokuthunyelwe kwakho kwebhulogi lapho uzibhala.
Uma uMlobi Ophilayo elanda itimu yakho nezigaba zakho, kufanele ube ulungele ukuhamba!
Yivivinye ngokukhetha ibhulogi yakho kwimenyu bese ungeza okuthunyelwe kwebhulogi. Bese uyithumela kubhulogi njengokusalungiswa. Ngena ngemvume ku-WordPress, chofoza ku-Posts futhi kufanele ubone okusalungiswa kwakho lapho!
Tags: umugqa wesihloko se-iphone 5I-5 ubude bomugqa wesihlokoumugqa wesifundo sewindows mobileamawindi womugqa wesifundo sewindows
Izindleko Zangempela Zokuxhumana Komphakathi
Unenkinga Ukubloga? Hlela ngokufanele.
Nov 13, 2011 ngo-10: 17 PM
konke kusebenza kahle ngamawindi ami aphile kwi-wordpress, kepha uma ngifaka isithombe bese ngilayisha kubhulogi, ohlangothini lwe-wordpress ngithola ukuthi nje kubukeka njengekhodi le-HTML. Ungachaza ukuthi ungayilungisa kanjani le nto ???
Nov 14, 2011 ngo-12: 24 AM
Awuqinisekile ukuthi K Milloy - kepha kungaba yinkinga yokufaka ikhodi. Kuneminye imininingwane kuWordPress, noma kunjalo: http://codex.wordpress.org/Windows_Live_Writer_Help